दुबै मिर्गौला फेल भएकी यशोदाको उपचारमा सहयोगको याचना – Pahilo Page
दुबै मिर्गौला फेल भएकी यशोदाको उपचारमा सहयोगको याचना
१६ फाल्गुन २०७५, बिहीबार १९:५० 647 पटक हेरिएको
सिन्धुली, १६ फागुन । दुबै मिर्गौला बिग्रिएर जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेकी सिन्धुली जिल्ला दूधौली नगरपालिका वडा नं. २ की यशोदा खड्काको उपचारका लागि सहयोग गरिदिन उनका बुबा लालबाहादुर खड्काले आग्रह गरेका छन् । दुबै मिर्गौला फेल भएर निरन्तर डाइलाइसिस गराइरहेकी सिन्धुलीको दूधौली नगरपालिका वडा नं. २ नयाँटोलकी २३ वर्षीया यशोदाको किड्नी प्रत्यारोपण गर्न आवश्यक रकम जुटाइदिन उनका बुवाले आग्रह गरेका हुन् ।
करीव नौ महिनाअघि दुबै किड्नी बिग्रिएपछि यशोदाले सातामा दुईपटक डाइलाइसिस गराइरहेकी छिन् । शुरुमा गाउँमा सामान्य रोगको उपचार गराए पनि व्यथाले च्याप्दै गएपछि वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेज, त्यसपछि काठमाडौको ओम अस्पताल हुँदै हाल जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेजमा उपचाररत छिन् । यशोदाको उपचार गराउँदा अहिलेसम्म २० लाख रुपैयाँ सकिएको छ । अहिले यशोदाको ऋण सापट गरेर जेनतेन निरन्तर डाइलाइसिस गराइरहेको यशोदाका बुवा लालबाहादुरले बताए ।
निम्न आर्थिक अवस्था भएका खड्का अहिले आर्थिक अवस्था कमोजर भएपछि चिन्तित छन् । विरामी यशोदाले सहयोगी संघसंस्था र व्यक्तिले सहयोग गरिदिए आफूले नयाँ जीवन पाउनसक्ने बताउँदै सहयोगको अपिल गरेकी हुन् । । थप जानकारीका लागि विरामीका बुवा लालबाहादुरलाई ९८४४१३९७४५ नम्बरमा फोन गरी जानकारी लिन सकिने छ ।